တော်တော်များများအခြေခံအမျိုးအစားများရှိပြီးဖြစ်သောလူ့ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၏ဖြစ်စဉ်းစားအသုံးအများဆုံးအာရုံကြောရောဂါများတစ်ခုမှာ။ ဒီရောဂါရှိသမျှကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်သူ၏ပါးစပ်ကနေအမြှုပ်ကျော်ခိုင်ခံ့စွာဝေဒနာကိုအားဖြင့်ထင်ရှားနေသည်။ အန္တရာယ်မှာကလူဒါပေမယ့်လည်းတိရိစ္ဆာန်များသာဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကိုယ်ခန္ဓာ၌မဆိုသွေဖည်သာတိုက်ခိုက်မှု၏အချိန်မှာကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ အမျိုးပျက်သောပြည်နယ်ကြောက်စိတ်သို့မဟုတ်၏အချိန်မှာတစ်ခါသာထင်ရှားပါလျှင် အပူ - အချိန်မတန်ကောက်စေပါဘူး။ ရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာများ - ကိုယ်ခန္ဓာ၏မိုပုံမှန်မဟုတ်သောအခွအေနေထပ်ခါတလဲလဲ။
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ - ရောဂါအဘယ်အရာကိုအမျိုးအစားများဖြစ်ပျက်?
မွေးရာပါနှင့်ဝယ်ယူ - ကျွမ်းကျင်သူတွေကရောဂါနှစ်ခုရဲ့အဓိကအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။ ပထမဦးဆုံးအ option ကိုပိုပြီးမကြာခဏဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ကြုံတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကလေးဘဝသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာညင်သာပျော့ပျောင်းသင်တန်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်ကုထုံးလုံးဝမူးယစ်ဆေးဝါးများစွန့်လွှတ်နိုင်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာထိုကဲ့သို့သောဝက်ရူးပြန်ရောဂါမီးခိုးရောင်ကိစ္စပျက်စီးသည်မဟုတ်။ ဒါဟာသိစိတ်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံအရှုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးဘာမှထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်လာသည်နှင့်ဘာမှမအောက်မေ့ပါဘူး။ အများအားဖြင့်ထိုသို့သောတိုက်ခိုက်မှု၏အမှု၌ကူညီပေးနိုင်အနီးအနားမှာတစ်စုံတစ်ဦးကလည်းမရှိများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သောမျိုးရိုးဗီဇမူမမှန်များသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်ပေါ်လာပါဘူး - သူတို့အချို့သောအချက်များအားဖြင့်သူတို့ကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းနေကြသည်။ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
ကုသရန်ခက်ခဲ၏ဝယ်ယူမျိုး။ သူကဦးနှောက်အပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ ဒါဟာစိတ်ဒဏ်ရာ, ရောင်ရမ်းခြင်း, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်စီးဆင်းမှုဒီလိုမျိုးတိတ်တဆိတ်, လူတစ်ဦးသတိဖြစ်နေဆဲပေမယ့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းသည်မဟုတ်။
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ cortex, cerebellum, ဒါမှမဟုတ်စည်၏ပြန့်ပွားပေါ် မူတည်. ။
အတူဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်ဖို့မလိုပဲ။ ခန္ဓာကိုယ် Twitch ၏ပုံစံအတွက်မဆိုတက်ကြွစွာပေါ်ထွန်းခြင်းများသောအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်သိသာဖြစ်လာသည်။ နို့စို့အရွယ်၏ကာလအတွင်းကလေးငယ်များယေဘုယျအားဖြင့်သာအော်ဟစ်သောအသံကိုအဖြစ်သွေဖီစောင့်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အထွေထွေ။ လူကြီးများအတွက်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားဖျော့နှင့် glaze ကြည့်၏, ဝိညာဏ်၏ယာယီမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးစေပါတယ်။ ဒုတိယ option ကိုနက်ရှိုင်းတဲ့အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်ဖြစ်ပါသည်, ဝိညာဏ်၏ပြီးပြည့်စုံသောဆုံးရှုံးမှုထင်ရှား။ ရလဒ်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်လုံးဝထိန်းချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်။
Esophageal အူကျ - အကြောင်းတရားများ, ကုသ
ရေတိမ် - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
အသည်း Hemangioma - ၏အကြောင်းရင်း
Lasix - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
ဒူးနာကျင်မှု - အကြောင်းရင်းများ
ခွေးအဘို့အ Aviary ကုမ္ပဏီ
Hematogen - ဖွဲ့စည်းမှု
2016 ၏နွေရာသီတှငျအဘယျ Vogue အတွက်ဘောင်းဘီတို?
ကိုယ်ဝန်လိမ် - ဓတေား၏ဤပုံစံ၏အကောင်းအဆိုး cons
အမေရိကန်ပန်ကိတ် - စာရွက်
အဆီလည်းမီးလောင်ဘို့ Apple ကခွံ